Steam Tamba: maitiro ekutamba Windows mavhidhiyo emitambo pane yako GNU / Linux distro | Linux Vakapindwa muropa
Steam Tamba: maitiro ekutamba Windows vhidhiyo mitambo pane yako GNU / Linux distro
Valve yakaedza zvikuru uye yakapa huwandu hwezvishandiso nemaraibhurari kuunza varaidzo kuLinux futi. Makumi gumi apfuura, kana ndikati iwe uri mutambi uye waishandisa Linux pazviri, vanogona kufunga kuti wakapenga, nekuda kwenhamba diki yemitambo yemavhidhiyo uye yakaderera mhando yavaive nayo. Asi ikozvino ivo vabuda uye vatove nhamba muzviuru, vachitodarika idzo dzeMacOS muhuwandu uye zvirokwazvo hunhu hwacho hwave kushamisa.
Imwe yemapurojekiti eValve azvino ave Steam Play, mutengi kubva kwaanogona kutamba mitambo yemavhidhiyo kubva kuGNU / Linux yedu, asi neprojekti yatiri kutaura nezvazvo vakawana zvakawanda, uye ndizvo sanganisa Waini muSteam Tamba pasi pezita Proton. Nezvo izvi hazviite chete kuti iwe ugone kutamba yemuno mitambo yemavhidhiyo, asi iwe zvakare unozogona kutamba ese echinyakare Windows mavhidhiyo emitambo akawedzerwa kune iyo chinyorwa.
Kana iwe uchinetseka kuti zvinoshanda sei, chokwadi ndechekuti Valve ine dhatabhesi inonzi ProtonDB nemazita ese anowanikwa pane yako Windows mutengi. Unogona kuona ese mazita aunogona kutamba nawo kubva kuLinux. Zvikamu zvinoenderana nekushanda Platinum, Ndarama, Sirivheri, Bronze, uye Broken. Kana mutambo uri Platinum, iwe unozogona kutamba paLinux pasina dambudziko, Goridhe ichashanda chaizvo asi ingangoda kumwe kugadzirisa, Sirivheri inoshanda zvakanaka nemamwe matambudziko madiki, Bronze inogona kunge iine matambudziko akati kurei uye Broken haishande.
Zvakare, kana iwe uchinetseka kana vachigona wedzera mavhidhiyo emavhidhiyo mazita kune Steam Tamba kunze kwekubva kuchitoro cheValve's Steam, senge GoG, nezvimwe, iwe unofanirwa kuziva kuti zvinogona zvakare kuitwa. Kana iwe uchida kuziva kuti iwe unogona sei kugadzirisa zvese izvi neSteam Play pane yako Linux distro, isu tinokuratidza iwe muLxA ...
1 Chii chinonzi Proton chaizvo?
2 Matanho ekuisa Steam Play
Chii chinonzi Proton chaizvo?
kubudikidza Proton haufanirwe kunetseka, Icho hachisi chinhu chaunofanira kubata nacho zvakananga, iwe uchashanda neValve's Steam mutengi senguva dzose, asi nekubatanidza chirongwa ichi kumutengi, zvinokutendera iwe kutamba mitambo yemavhidhiyo yaimbove inogoneka chete paWindows.
Kana iwe ukaverenga LxA kazhinji iwe unenge watoziva kare chinonzi proton chii, sezvo tataura zvakawanda nezvake. Chaizvoizvo ndeye inoenderana dura rakagadzirwa neValve uye yakavhurwa sosi yekumhanyisa Windows vhidhiyo mitambo paLinux. Inosanganisirwa mune iyo Steam Linux mutengi nekukasira, iine hombe runyorwa rwemazita aripo mazita.
Proton haina kugadzirwa kubva pakutanga, asi ivo vakashandisa Waini sehwaro. Chii chinoitika kuti Valve yakavandudza akati base nekuwedzera zvinowedzera zvimwe seDXVKndiko kuti, raibhurari iyo inoshandura Direct3D graphical API mirairo muVulkan inoshevedza nhunzi. Izvo zvinopa mitambo yemavhidhiyo simba reiyi nyowani yakavhurwa sosi API yatakataura nezvayo zvakanyanya.
Kana iwe uchida kuona nekudzidza iyo kodhi kodhi de DXVK iwe unogona kuzviita kubva kune yavo GitHub peji, uye iwe unogona zvakare kuita zvakafanana nekodhi kodhi kodhi ye Proton.
Izvi zvaireva kuti dai paitove nezviuru zvemazita emhando yekutamba natively paLinux, ikozvino mamwe akawanda akawedzerwa kune iyo runyorwa kuenderera mberi nekupa simba kumitambo yeLinux.
Matanho ekuisa Steam Play
Matanho ekugona mhanya yemuno Microsoft Windows mitambo yemavhidhiyo paLinux Ndizvo:
Isa iyo steam mutengi mune yako distro
Vhura Steam uye wozoenda kuZvirongwa zvinoratidzika kumusoro.
Mune sarudzo dzinoonekwa kuruboshwe iwe unofanirwa kusarudza Akaunti uye wobva wadzvanya pane ZVINOCHINJA.
Sarudza Steam Beta Kwidziridzo, gamuchira uye ichatora zvese zvitsva maficha uye mutengi anotangazve.
Iye zvino mune iyo Zvirongwa rondedzero iyo Steam Play sarudzo ichaonekwa kwaunofanira kuenda.
Ikoko inogonesa Steam Play yemazita akatsigirwa uye Steam Play yemazita ese uye bvuma.
Iye zvino unogona kudzokera kuchidzitiro chikuru uye kutsvaga mazita aunoda kuwana
Mamwe matanho acho akafanana nezvaungaita muSteam chero mutambo wevhidhiyo ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » chiutsi » Steam Tamba: maitiro ekutamba Windows vhidhiyo mitambo pane yako GNU / Linux distro
Mufananidzo weMiguel del Toro Aguirre akadaro
Mushumo wakanaka kwazvo, unoshanda zvakakwana. Ndotenda zvikuru.
Pindura kuna Miguel del Toro Aguirre
Hofisi 365 yakazivisa zvisiri pamutemo muzvikoro zveGerman muHurumende yeHessen
Lucidor: muchinjikwa-chikuva e-bhuku muverengi